Famantarana ny fotoana | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Rahoviana no misidina! Voalohany nijery ny voninkazo tamin'ny lohataona ianao, nanandrana ny hakitroky ny fahavaratra, alohan'ny nandraisanao ny voankazo masaka tamin'ny fotoam-pijinjana. Ankehitriny mijery ny ho avy miaraka amin'ny masonao malalaka. Miankina amin'ny toerana tadiavinao, ny masonao amin'ny sary rakotra dia miitatra mankany amin'ilay hazo mirongo voaravaka satroka, mankany amin'ny ala alokaloka na ireo havoana eo ambadika. Angamba ianao miahiahy amin'ny sarona rahona tsy mety mihetsika, izay tsy ahitan'ny olona na inona na inona ilay hazavana mamirapiratra izay manazava anao.
Faly aho mahita famantarana mandritra ny fotoana. Rehefa mijery ny famantaranandroko aho dia ilazana amiko hoe rahoviana ary fotoana izay no anehoany ahy ny zava-nihatra tamiko. Izany no ilako maso misokatra ara-panahy, amin'ny fomba ahoana no ahafahako mahita an'i Jesosy sy izay lazainy amiko.
Ity fisainana ity dia mitondra ahy ho any amin'ilay toerana ao amin'ny taratasy ho an'ny Korintiana, izay milaza hoe: «Fa nanjary maizina ny sain'ny olona, ​​ary mandrak'androany izany dia voaly ny fisainany. Rehefa vakiana ny lalàna taloha dia tsy ekeny ny fahamarinana. Io voaly io dia tsy afaka ihany amin'ny finoana an'i Kristy foanana » (2 Korintiana 3,14 Vaovao Fiainana Vaovao).
Ity sarona ity, sarona rahona ara-panahy no manakana anao tsy hahita an'i Jesosy. Izy irery no afaka manaisotra azy satria fahazavan'izao tontolo izao izy. Tsy misy lalàna sy fanarahana ny lalàna rehetra mitondra anao, ry mpamaky malala, fa i Jesosy irery ihany. Te-hanaiky ny tolom-pitiavany ve ianao? Matokia fa manome anao fahitana mazava momba ny mandrakizay, amin'ny fotoana maharitra.
Raha manaiky an'i Jesosy ho Tomponao sy Tomponao manokana ianao dia misy vokany eo amin'ny fiainanao sy ny an'ny mpiara-monina aminao izany. "Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Ampamirapirato eo imason'ny olona ny fahazavanao hahitany ny asa soa ataonao ka hiderany ny Rainao Izay any an-danitra » (avy amin'ny Matio 5,14 sy 16).
Mamiratra ao aminao ny fahazavan’i Jesosy raha mino an’i Jesosy sy ny teniny. Esorina ny voaly. Miaraka amin'ny asanao dia mandray anjara amin'ny fanambarana lehibe indrindra momba ny fanjakan'Andriamanitra ianao izay midina ao am-pontsika ny fitiavan'Andriamanitra.
Manjary manana traikefa ianao amin'ny fiantraikan'ny fitiavana amin'ny alàlan'ny Zanak'Andriamanitra tonga nofo ary manome voninahitra anao sy manome voninahitra an'Andriamanitra.